Yenza ngamandla amagama aphambili eziNtengiso | Martech Zone
Yenza ngamandla amagama aphambili kwiiNtengiso
NgeCawa, ngoSeptemba 23, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngelixa ufunda Indawo kaJohn Chow, Ndilibale ukuba ndibhalisele iAuctionAds kodwa andizange ndibeke ikhowudi kwindawo yam. Ngokuhlwanje ndongeze ikhowudi kwizithuba zam ezizodwa phakathi komxholo weposi kunye necandelo lamagqabaza. Ndijonge phambili ekuboneni indlela abaqhuba ngayo.
I-AuctionAds inomsebenzi omnandi apho ungachaza khona amagama aphambili onqwenela ukuvelisa nawo. Endaweni yokufumana ezinye eziqhelekileyo kwindawo yam yonke, ndibeka Iplagi yokugqibela yeQela leMfazwe ukusebenzisa (kwakhona)!
I-AuctionAds ifuna ukuba ufomathile amagama akho aphambili kwintengiso kunye nee-semi-colons njenge-delimiter. Ngenxa yoko, kuya kufuneka wenze ifomathi yesiqhelo kwimveliso yekhowudi yeGorha lokugqibela. Ndifomathile eyam ukudwelisa ithegi yokuqala emva koko ndibeke i-semi-colon kunye nendawo phakathi kwezinye. Ukongeza, ndikhankanye ubuninzi bamagama aphambili ama-3 ukuba aboniswe kwaye ndiyilandele ngamagama aphambili angama-3 endaziyo ukuba aya kuhlala ebonisa intengiso.
Ukujolisa kwiNtengiso kumxholo kufanele kukhokelele kunyusa kwiirhafu zokucofa kwintengiso. Kutshanje ndivavanye iGoogle Adsense ngokuchasene noGqithiso lukaGoogle kwindawo yam enye ekujoliswe kuyo kwaye iAdsense yayinamaxesha asibhozo kwinqanaba lokucofa. Ukudibana kwintengiso yiyo yonke into! Ukuba awuboneleli ngentengiso efanelekileyo, uza kucaphukisa abafundi bakho okanye baya kukhula bengahoyi iintengiso. Akukho mntu uyifunayo!
Inqaku elinye: Xa uvavanya ikhowudi, ngekhe ubuyise nasiphi na isiphumo ekuqaleni. Abantu kwiNtengiso yeefandesi bathi kuthatha ixesha ukwakha ezo ziphumo zingundoqo. Andiqinisekanga ukuba ithatha ixesha elingakanani. Usengayifumana ingeniso yokudlulisela ngaphandle konxibelelwano lweeNtengiso zeAduction, nangona!
tags: Iintengiso zentengiso
Intengiso yobuGcisa neOxymoron
Hayi Mike! Ukuthengisa kukwaMsebenzi woKwenza